युद्धको ६९ औं दिन रुसले गर्यो अमेरिका हल्लाउने घोषणा — Imandarmedia.com
युद्धको ६९ औं दिन रुसले गर्यो अमेरिका हल्लाउने घोषणा
काठमाडौँ। रूसले ९ दिनपछि युक्रेनका सहयोगी देशविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्ने सुचाना गारी गरिदिएको छ। अब विश्वयुद्धको सुरुवात हुने निश्चित जस्तै भएको छ।रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि नै आणविक युद्ध र विश्वयुद्धको धम्की दिइरहेको छ।
यस्तो युद्धको डर पनि थियो, तर अहिलेसम्म त्यो धम्की, अनुमान र छलफलमा मात्र सीमित थियो। पहिलो पटक रुस र युक्रेन बाहेक विश्वको तेस्रो देशले रुसले कुनै खास दिनमा युद्ध घोषणा गर्ने कुरा स्वीकार गरेको छ। त्यो तेस्रो देश बेलायत हो।
बेलायतले विश्व युद्धको घोषणाको मिति दिएको छ। बेलायतले मे ९ मा हुने विजय दिवसको परेडमा रुसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरूविरुद्ध युद्धको घोषणा गर्ने तयारी गरेको दाबी गरेको छ। बेलायतले पनि रुसले युक्रेनलाई दिइने सम्पूर्ण सहायता प्रणाली तोड्ने बताएको छ।
तर यो दाबी किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमा स्पेशल मिलिटरी अपरेशनको नाममा हरेक हतियार प्रयोग गरेको थियो। हाइपरसोनिक मिसाइल, क्लस्टर बम र भ्याकुम बमले युक्रेनलाई ध्वस्त बनाएको थियो।
तर समयसँगै रुस पनि लामो समयसम्म चलेको युद्धका कारण बेचैन हुँदै गइरहेको छ। रूस लामो समय युद्ध लड्न चाहँदैन। रुसले आफ्ना सेनापतिहरूलाई मे ९ अघि युक्रेन कब्जा गर्न निर्देशन दिएको खबर आएको छ।
यो किनभने रूसले ९ मे मा विजय दिवस मनाउँछ। मे ९ मा रूसले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजय पाएको दिवसको रूपमा मनाउँछ, जसमा उसले विश्वलाई आफ्नो शक्ति देखाउँछ।
९ मे १९४५ मा सोभियत सेनाले नाजी जर्मनीको सेनालाई पराजित गर्यो र जित्यो। यस विजयलाई प्रत्येक वर्ष विजय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। अब यो पनि भन्न आवश्यक छ कि युक्रेनको विनाश र मे ९ मा के सम्बन्ध छ?
वास्तवमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा युक्रेनको तर्फबाट लड्ने हरेक व्यक्तिलाई नियो नाजी भनेको थियो। सायद यही कारणले गर्दा पुटिनले रुसले सोभियत शैलीमा युक्रेनको यो तथाकथित नवनाजी सेनालाई पराजित गरेर विजय दिवसको परेडमा गर्व गरोस् भन्ने चाहन्छन्।
युक्रेन जितेर उनी रुसको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपतिको रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहन्छन्। रसियाले युक्रेनको डोनबास, मारिउपोल, खेरसन र खार्किभ जस्ता भागहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ ताकि उसले विजय दिवस परेडमा यी क्षेत्रहरूमा आफ्नो विजय देखाउन सकोस्। य
ही कारणले गर्दा बेलायतलगायत सबै नेटो देश मे ९ तारिखलाई लिएर त्रसित छन्। संसारलाई डर छ कि मे ९, २०२२ पहिलो विश्वयुद्धको सुरुवातको आधिकारिक मिति नबनोस्। यो विजय दिवस परेड नै हो जसले विश्वलाई रूसको क्षमता महसुस गराउँछ।
यस परेडमा समावेश हतियारको झाँकीले विश्वका शक्तिशाली देशहरूलाई रुससँग भिड्नु खतरनाक हुन सक्छ भन्ने सोच्न बाध्य पार्छ। विश्वले फेरि युक्रेनमा रुसको फायरपावर हेरिरहेको छ, तर धेरै देशहरू यस युद्धमा रूसको विजयको बीचमा बाधा बनेका छन्।
यस्तो परिवेशमा पुटिनलाई रुसको स्वाभिमान जोगाउने चुनौती पनि छ। पुटिनले यो युद्धमा युक्रेनको पराजय निश्चित छ भन्ने विश्वलाई बताउन चाहन्छन् र त्यसैले उनको विजय दिवसको योजना सक्रिय भएको छ। जसका कारण विश्वका धेरै शक्तिशाली देशहरु डराएका छन्।
बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसले मे ९ मा हुने विजय दिवस परेडमा रुसले युक्रेनमाथि आफ्नो विजयको घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन्। तर, रुसी सेनाले पुटिनले चाहेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेको छैन।
त्यसैले पुटिनले विजय दिवसको परेडको दिन युक्रेनमा आफ्नो पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने घोषणा पनि गर्न सक्छन्। पुटिनले परेडमा आफ्नो देशका जनतालाई सारा संसारका नाजीहरूका विरुद्धमा रुसले युक्रेनमा आफ्नो ठूलो सेना पठाउन लागेको कुरा बताउन सक्छन्।
बेलायतको यो डर धेरै अर्थमा सत्य पनि हुन सक्छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमणको गति बढाएको छ र उसको सेना केही क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न चाहन्छ। रूसी सेनाले मारिउपोललाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ।
डोनबास क्षेत्रतर्फ आउँदै गरेको युक्रेनी सेनामाथि रकेट आक्रमण पनि तीव्र गतिमा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा मे ९ रुसका लागि निकै ठूलो दिन हुनसक्छ भन्नु पनि सहि हुन सक्छ । यो दिन रुसका विरोधीहरूका लागि विनाशको दिन पनि हुन सक्छ।
रुसका टिभि च्यानलहरूमा तेस्रो विश्वयुद्ध बाहेक रुसको बाटो के हो भन्ने बहस चलिरहेको छ । यस्तो देखिन्छ कि रसियाले मानसिक रूपमा आफ्ना जनतालाई तेस्रो विश्व युद्धको लागि तयार गरिरहेको छ।
रुसको सरकारी टेलिभिजन च्यानल आरटीकी सम्पादक मार्गरिटा सिमोन्यानले एक टिभी कार्यक्रममा रुसले युक्रेनमा हारेको अवस्थामा तेस्रो विश्वयुद्ध वा आणविक आक्रमणको विकल्प नरहेको बताइन्।
मार्गरिटा सिमोन्यानले युक्रेनमा रूस हार्यो भने तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने बताइन्। मलाई लाग्छ तेस्रो विश्वयुद्ध सम्भव छ’ उनले भनिन् ‘जसले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, जसले हाम्रा नेता भ्लादिमिर पुटिनलाई चिन्नुहुन्छ, उनीहरूले यो युद्ध परमाणु हमलाबाट समाप्त हुनेछ भन्ने कुरा बुझ्छन्।
म यो भन्दा बढी शंका गर्छु। तपाईं हामीसँग के विकल्प छोड्दै हुनुहुन्छ? युक्रेन को पूर्ण विनाश? आणविक आक्रमण? यसपटक सारा विश्वको नजर रुसमा मे ९ मा हुने विजय दिवस परेडमा केन्द्रित हुनेछ। यस परेडमा पुटिनले के भन्लान् भन्ने कुरा विश्वले सुन्न चाहन्छ।
किनभने पुटिनको एउटा इशारा विश्वयुद्धको सुरुवातको ट्रिगर बन्न सक्छ। विजय दिवस परेडमा पुटिनले बोल्दा युक्रेनको उल्लेख अवश्य हुनेछ र युक्रेन युद्धमा रुसको विजयको दाबी बाहेक उनी केही भन्न चाहँदैनन्।
यस कारणले गर्दा पुटिनले यस युद्धको समयमा धेरै पटक आफ्नो योजना परिवर्तन गरे। उनी पहिले युक्रेनमा सत्ता परिवर्तन चाहन्थे, त्यसपछि युक्रेनलाई दुई भागमा विभाजन गर्न चाहन्थे। अब उनीहरू केही चुनिएका क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण चाहन्छन्। रुस-युक्रेन युद्धको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा रुसको योजनाका केही सङ्केतहरू छन्।
पछिल्लो समयको कुरा गर्दा रुसको आक्रमणको केन्द्रविन्दु पूरै युक्रेन नभई केही भागमा केन्द्रित छ। रुसी आक्रमणहरू डोनबास क्षेत्रमा बढी भइरहेका छन्, जसमा लुहान्स्क, डोनेस्कजस्ता क्षेत्रहरू समावेश छन्, जसमा रूस पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छ। रुस पनि खार्किभमा पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छ र यस क्षेत्रमा पनि रुसी आक्रमण तीव्र भएको छ।
रुसले मारिउपोल कब्जा गरेको छ, जापोरिझियाका क्षेत्रहरू पनि रुसी नियन्त्रणमा छन्। मेलिटोपोल र खेरसनमा पनि रुसी सेना अडिग छ। रुसले खेरसोनमा युक्रेनी मुद्रालाई रुबलसँग बदल्ने योजना बनाएको छ। ओडेसाका केही भागहरूमा रुसी सेनाको पनि उपस्थिति छ।रुस युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा सीमित भएको छ। रूस मे ९ अघि यहाँबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छैन।
रुसको योजना क्रिमियाबाट ल्यान्ड करिडोर निर्माण गर्ने भएको विज्ञहरू बताउँछन्। जुन क्षेत्रमा अहिले आक्रमण भइरहेको छ वा नियन्त्रणमा छ, ती क्षेत्रहरूबाट यो ल्याण्ड करिडोर जानेछ। यो योजना सक्रिय भएको छ। यसरी युक्रेनको यो पूरै भाग रुसको नियन्त्रणमा आउन सक्छ र रुसले यसलाई प्राप्त गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएको छ।
पुटिनको मे ९ योजनाको झलक कीभमा पनि देखिएको थियो जब संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले २७ अप्रिलमा रूसको भ्रमण गरेका थिए। गुटेरेसले भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेर युद्ध रोक्न र शान्ति स्थापना गर्न आग्रह गरे। त्यसपछि उनले युक्रेन पुगेर राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट गरे।
आफ्नो सम्बोधनमा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले फेरि एक पटक शान्तिको लागि अपील गरे, तर रूसले मिसाइल आक्रमणको साथ उनको अपीलको जवाफ दियो। रुसले गुटेर्रेस बसेको होटलबाट अलि टाढा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। रुसी रक्षामन्त्रीले युक्रेनमा खसालेको बम सही लक्ष्यमा प्रहार भएको पनि बयान दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र र नेटो युक्रेनमा शान्ति परेवा उडाउन चाहन्छन् र रसियाले ती परेवाहरूलाई मिसाइलले शिकार गरिरहेको छ। अमेरिका होस्, नेटो देश होस् वा राष्ट्रसंघ प्रमुख, जसले शान्ति स्थापना गर्छ, पुटिनको मिसाइल क्रान्ति उसको विरुद्धमा हुने पुटिनको सङ्केत स्पष्ट छ।